iDVD Alternative: DVD Gubidda Software ka fiican yahay iDVD (Mavericks mid)
iDVD waa software ah DVD abuurka default on Mac. Tan iyo markii aad halkan ku sugan yihiin, kaliya aad ka heli kartaa daal ee iDVD, ama iDVD uusan si fiican u shaqeeyaan mashiinada aad. Aricle Tani waxay ku talin doonaa kale oo weyn iDVD si fiican u la jaan qaada Mavericks si ay kuu caawiyaan.
Best iDVD duwan oo loogu talagalay Mac (Yosemite ka mid ah)
• Gubashada video in kasta oo qaab si DVD ee tayo sare leh.
• Samee slideshow ah sawir qurux badan leh saamaynta stuning.
• qalabaysan la ballaaran oo si qurux badan loogu tala galay arrimo DVD menu.
• Taabo aad video iyo DVD menu arrimo sida si aad u dhadhan.
OS taageerayaan: Mac OS X 10.11 (El Capitan), 10,10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6
Maxaad Dooro Wondershare DVD Creator
Taageero kasta Video
Waa la jaan qaada dhawaad ​​qaab video kasta, sida AVI, MP4, MKV, MOV, iwm Just dajiyaan aad video u galay, ka dibna waxa aad dareemi kartaa lacag la'aan ah si ay u gubaan video in disc DVD, DVD folder iyo files ISO.
Eebaha Edit Video
doonaysaa in aad xaalkaa video hor DVD gubanaya? Codsigan waa awood fiican u personlize aad video. Waxaad u xoojin karto, jar aad video, iyo dar watermark iyo Cinwaan si aad video.
Foomamka DVD Menu u ballaaran
Waxay kuu ogolaanaysaa inaad sameeyo DVD ah ay dad badan la dhisay-in arrimo DVD menu, oo kala soo bixi badan oo mawduucyada kala duwan DVD menu, fasax uncluding, fasax, hal-abuurka, iwm
Samee slideshow photo
Just qaadan codsiga si creat aad slideshow photo u gaar ah, oo markaas waa inuu ku gubaa si DVD. Waxaad retouch kartaa slideshow by falinjeeerka, dejinta muddada sawirka iyo kala guurka, isagoo intaa ku daray music soo jeeda, iwm
Sida loo isticmaalo this kale iDVD u Mac (El Capitan ka mid ah)
Sida ka khayr badan iDVD kale ah Mac, qalab gubashadii DVD ah ee Mac waxaa loogu talagalay in la sameeyo wax walba oo fudud oo si sahlan. Its interface dareen kugu hanuuniyo dhammayn nidaamka gubashada dhan in dhawr miridh.
Tallaabada 1. Load video iyo / ama sawir files galay kale iDVD
Halkan waxaan ku dooro "Abuur Project New a" in la furo suuqa kala hoose. Waxaad si toos ah jiidi karaan videos ama sawiro barnaamijka ama guji "+" badhanka si ay u dajiyaan. . Waxaad riix kartaa "↑" iyo "↓" badhanka si ay u habayn iyo si haddii loo baahdo.
Fiiro gaar ah: Waxaad wada midowdo karaa dhowr videos galay qayb u gaar ah. Haddii aad rabto in aad u kala sooci, kaliya waxa ay ka soo bixiyo Murayaad ilaa muuqataa line buluug ah.
Tallaabada 2. Edit faylasha video (optional)
Qaar badan oo qalab video tafatirka waxaa lagu bixiyaa si kor video files, oo ay ku jiraan Dalag, isku beddesha, Split, goo, watermark, Raadka, iwm Si fudud u muujiyo video ah oo aad u baahan tahay in ay wax ka bedel iyo guji "Edit" button. Dhammaan isbeddelada aad sameeyey muuqan doonaan suuqa kala saxda ah.
Tallaabada 3. Samee bedeley DVD caado u DVD aad (optional)
In ka badan 90 nooc oo Hababka DVD menu kartoon ah oo ma guurto ah oo lacag la'aan ah waxay ku jiraan kale iDVD Mac. Si aan ku bilaabo, riix batoonka 'Menu' iyo doortaan qaab menu jecel yahay, ka dibna waxaa la shakhsiyeeyo aad background image, music soo jeeda, booska item, iwm Dooro "Menu No" si ay u gubaan DVD aan menu ah. Haddii aad si gaar ah sida bedeley qaar ka mid ah, waxaad iyaga ku dari kartaa in uu jecel yahay, waayo, si fudud u helaan waqti soo socda.
Tallaabada 4. Kulanka Xiisaha iyo inuu bilowdo
Hubi in wax walba waa qumman yahay adigoo gujinaya "Kulanka Xiisaha Leh" badhanka si ay u eegaan wax aad DVD movie. Markaas gelin DVD disc maran oo guji "Guba" si ay u doortaan "DVD cajalid" doorasho ka menu hoos-hoos. Haddaba kanu kale iDVD hore u bilaabo inuu shaqeeyo, kaliya waxaa ka tago ee asalka ah. Marka gubashada DVD dhamaato, waa tuurid doonaa DVD si toos ah.
Fiiro gaar ah: Haddii mashruuca DVD aad ka ballaaran yahay 4.7G oo aadan haysan disc DVD9 ah (7.9g), kaliya geliso disc DVD5 ah, Wondershare Mac DVD Creator tanaasul doonaa dhexeeya tayada video iyo size file. Your movie si toos ah resize doonaa si ku haboon disc DVD5 ah.
1. In fact, haddii yoolkaaga ugu dambeeya waa ku shido oo keliya DVDs, aanad haysan si loogu badalo in ay qaab ISO hore. Waxaad kartaa in DVD gubi MP4 si toos ah app this halkii.
2. Haddii aad ku badaley MP4 in files ISO ka dibna gubay in disc DVD oo ku fashilantay in ay ka shaqeeyaan DVD guriga ciyaaryahan, taasi MP4 si ay hawlaha qaab beddelidda ISO kuma hagaagsanayn.
3. Diinta MP4 in ISO sida disc xog ah ka dibna gubi in DVD disc ah oo aan la aqoonsan badan ciyaartoyda DVD. Waxa aad u baahan tahay waa barnaamij runtii MP4 in ay ISO shaqo diinta sida kor ku xusan DVD abuure .
Su'aalaha ku saabsan iDVD Dhibaatooyinka:
1. Su'aal: gubashadii iDVD hayaa baraf iyo DVD disk la diiday tallaabo la soo dhaafay iyada oo fariin qalad lahayn. Sidee si ay u xaliyaan dhibaatada?
Waxaad isku dayi kartaa inaad la qabsato x2 xawaaraha gubatay iyo badbaadin DVD sida DiskImage. Haddii iDVD weli ma shaqeeyaan, way fiican tahay in aad eegto kale iDVD ah. Waxaad arki kartaa threads xal qaar ka mid ah waxyaabaha hadh goobaha adag, laakiin ka taxadir haddii aadan Forbes ayaa computer ah. Dhab ahaantii, ma jirto sida xal fiican in aad dhibaato waqtiga xaadirka ah.
2. Su'aal: iDVD weli ka shaqeeyaa Mavericks?
Run ahaantii, iDVD la joojiyey by Apple muddo dheer. Si kastaba ha ahaatee, waxaan ka heli in iDVD 7 si fiican u shaqeeyaa Mavericks. Waxaad heli karin iDVD 7 si gooni gooni ah, haddii ay dhacdo in aad ka iibsan iLife '09 ama '11. Haddii aad u maleyneyso in uu yahay mid aad u badan oo aad u, kaliya ka raadi dukaanka Mac Apple si ay u helaan software kale la mid ah.
> Resource > DVD > iDVD Alternative: DVD Gubidda Software ka fiican yahay iDVD (Yosemite mid)